မြန်မာလိုအားဖြင့် လေးဘီးယက်အမျိုးအစားလို့ခေါ်ကြပေမဲ့ နိုင်ငံတကာမော်တော်ကားအင်ဂျင်နီယာစနစ်တွေမှာတော့ All-Wheel Drive (AWD) နဲ့ 4-Wheel Drive (4WD) ဆိုပြီး ခွဲခြားသုံးနှုန်း‌ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ တချို့ကလည်း AWD နဲ့ 4WD ကို အတူတူပဲလို့လည်း ယူဆကြတယ်။ မော်တော်ကားတစ်စီးရဲ့ ‌‌ရှေ့ဘီးနဲ့နောက်ဘီးတွေအားလုံးကို ရုန်းအားနဲ့ ပြိုင်တူလည်ပတ်စေတဲ့ Drivetrain မျိုးက ကားဝါသနာရှင်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားတာတော့ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ AWD နဲ့ 4WD စနစ်တွေကြားက ကွာခြားမှုက ဘာလဲ။ အသုံးအနှုန်းအရ ဒီစနစ် ၂ မျိုးဟာ အမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးတတ်ပြီး ဘယ်စနစ်က ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲဆိုတာကိုလည်း မကွဲပြားတတ်ကြပါဘူး။ ပိုဆိုးတာက ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကိုယ်တိုင်က AWD နဲ့ 4WD ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို ကိုယ်ပိုင်အယူအဆနဲ့ အသုံးပြုထုတ်လုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ AWD က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ 4WD က ဘယ်လိုလည်ပတ်သလဲ။ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကဘာလဲ ဆိုတာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ဒီအချက်တွေကို သိထားခြင်းအားဖြင့် စာဖတ်သူအနေနဲ့ မိသားစုသုံး SUV တွေ၊ Midsize SUV အမျိုးအစားကားတွေ၊ Truck ကားတွေဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် မိမိနဲ့အကိုက်ညီဆုံးရွေးချယ်မှုကို လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
All-Wheel Drive ဆိုတာ ဘာလဲ?
All-Wheel Drive ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပဲ ကားတစ်စီးရဲ့ရှေ့ဘီးနဲ့နောက်ဘီးတွေအားလုံးဆီကို ရုန်းအားပို့လွှတ်ပြီး လည်ပတ်မောင်းနှင်စေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ပိုင်းမှာတော့ Drivetrain အမျိုးအစားအရ AWD စနစ်ကို ၂ မျိုးထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ တစ်မျိုးက ဘီးအားလုံးကို စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်စေတဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီတချို့က full-time AWD လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ part-time AWD (သို့) automatic AWD လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားပါ။ ဒီစနစ်မှာတော့ သာမန်အချိန်တွေမှာ ရှေ့ဘီးဖြစ်စေ၊ နောက်ဘီးဖြစ်စေ ၂ ဘီးသာလည်ပတ်ပြီး တောင်တက်တောင်ဆင်းလို ကုတ်အားပိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဘီးအားလုံးလည်ပတ်စေတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
All-Wheel Drive စနစ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
Full-time နဲ့ part-time အမျိုးအစား AWD စနစ် ၂ ခုစလုံးဟာ ယာဉ်မောင်းသူရဲ့ထိန်းချုပ်စေခိုင်းမှုမလိုအပ်ဘဲ အလိုအလျောက်လည်ပတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာတော့ ကားဘီးတွေအပေါ် ရုန်းအားဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ mode တွေရွေးချယ်စရာပါရှိတတ်ပါတယ်။ ဘီးတွေအပေါ် ရုန်းအားသက်ရောက်မှုဟာ အင်ဂျင်ကနေထွက်လာတဲ့ လှည့်အား (Torque) အပေါ်မူတည်တာကြောင့် ဘီးကုတ်အားကိုလည်း လိုသလိုအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Full-time AWD မှာ ‌‌ရှေ့ဘီးဝန်ရိုးနဲ့ နောက်ဘီးဝန်ရိုးတွေကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းလည်ပတ်စေပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားဟာ ခြောက်သွေ့ပြောင်ချောနေတဲ့လမ်းမျက်နှာပြင်တွေမှာ တည်ငြိမ်စွာမောင်းနှင်နိုင်စေပါတယ်။ တကယ်လို့ ရေခဲ၊ ဆီးနှင်းနဲ့ ရွှံ့တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့လမ်းမျိုးမှာဆိုရင်တော့ full-time AWD ကို ပိုပြီးကုတ်အားကောင်းစေတဲ့ mode မျိုးနဲ့မောင်းနှင်သင့်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ part-time AWD ဟာ ရှေ့ပိုင်းဖြစ်စေ၊ နောက်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ ဘီး ၂ ဘီးဆီကိုပဲ လှည့်အား (Torque) ကို ပို့လွှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သာမန်ထက်ပိုပြီး အားစိုက်ရုန်းရတော့မယ့်လမ်းကြောအခြေအနေမျိုးမှာ ကျန်တဲ့ဘီးတွေဆီကို Torque သက်ရောက်စေပြီး အလိုအလျောက်လည်ပတ်စေတဲ့စနစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ modern part-time AWD စနစ်တွေမှာတော့ ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အီလက်ထရောနစ်အာရုံခံစနစ်တွေပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအာရုံခံစနစ်တွေကပဲ AWD စနစ်ကို အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေးသွားတာပါ။
AWD ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်
AWD စနစ်မှာ အမြင်သာဆုံးအားသာချက်ကတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာကို ယာဉ်မောင်းသူကနေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချစရာမလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ AWD စနစ်ဟာ မိုးထဲလေထဲမှာရော၊ ဆီးနှင်းတွေထဲမှာပါ မောင်းနှင်နိင်ပြီး လမ်းကြမ်းမောင်းဖို့လည်း သင့်တော်တဲ့စနစ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တချို့ယာဉ်မောင်းသူတွေကတော့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းတွေမှာ 2-Wheel နဲ့ 4WD စနစ်ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ရတာမျိုးကို နှစ်သက်တတ်ကြတာကြောင့် AWD စနစ်နဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ ပြီးတော့လည်း AWD စနစ်ဟာ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုများပြားသလို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာမှာလည်း ကုန်ကျစရိတ်များပြားပါတယ်။
4-Wheel Drive ဆိုတာ ဘာလဲ?
မော်တော်ကားတစ်စီးရဲ့ ဘီး ၄ ဘီးစလုံးကို ရုန်းအားပို့လွတ်ပြီး လည်ပတ်စေတဲ့ သမားရိုးကျစနစ်တစ်ခုကို 4-Wheel Drive (4WD) ခေါ်ပါတယ်။ 4WD ဟာ အင်ဂျင်စက်အသုံးပြုတဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခေတ်ဦးပိုင်းမှာကတည်းက ပေါ်ထွက်လာတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး ကုန်းမြင့်တက်မယ့် Truck ကားကြီးတွေ၊ တာယာထူထူကြီးကြီးတပ်ထားတဲ့ ဆွဲကားကြီးတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်တွေကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ 4WD အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာကလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့ပြီး တကယ့်ကိုကြမ်းတမ်းတဲ့ တောလမ်းတွေမှာ မောင်းနှင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တချို့ကားကုမ္ပဏီတွေထုတ်လုပ်တဲ့ ဇိမ်ခံကားကြီးတွေမှာလည်း 4WD စနစ်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အမြင့်မားဆုံးကုတ်အားကိုရရှိဖို့ပါ။
4-Wheel Drive စနစ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
All-Wheel Drive စနစ်လိုပဲ 4WD ဟာလည်း ကားရဲ့ ဘီး ၄ ဘီးဆီကို Torque ပို့လွှတ်ပြီး လည်ပတ်စေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ 4WD ရဲ့ ရုန်းအားဟာ AWD ထက်ပိုပြီးပြင်းထန်သလို တကယ့်ကိုဆိုးရွားတဲ့မြေမျက်နှာပြင်အခြေအနေတွေမှာ တည်ငြိမ်စွာမောင်းနှင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ 4WD မှာလည်း full-time နဲ့ part-time အမျိုးအစားတွေခွဲခြားထားပါသေးတယ်။ 4WD စနစ်တော်တော်များများမှာ ဘီးရဲ့ရုန်းအားကို အနိမ့်အမြင့် အဆင့်ဆင့်ခွဲခြားထားပြီး အဲဒီအဆင့်တွေကို ယာဉ်မောင်းသူကိုယ်တိုင်က အီလက်ထရောနစ်ခလုတ် (သို့) လီဗာကို စိတ်ကြိုက်ကစားပြီး ပြောင်းလဲမောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် AWD ဟာ အော်တိုဂီယာစနစ်နဲ့တူပြီး 4WD ကိုတော့ မန်နျူရယ်ဂီယာလိုမျိုး အကြမ်းဖျင်းသတ်မှတ်ရမှာပါ။
Full-time 4WD စနစ်ဟာလည်း full-time AWD ရဲ့ လည်ပတ်ပုံနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ဘီး ၄ ဘီးစလုံးဟာ လှည့်အား (Torque) ကို စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိပြီး အချိန်ပြည့်လည်ပတ်မောင်းနှင်တဲ့စနစ်ပါ။ တချို့ကားဒီဇိုင်းတွေမှာတော့ ရှေ့ဘီးဝန်ရိုးနဲ့ နောက်ဘီးဝန်ရိုးတွေပေါ်မှာ ရုန်းအားအချိုးအစားချိန်ညှိနိုင်တဲ့ mode တွေ ပါရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီအမျိုးအစားကတော့ ‌လေးဘီးယက်ကား‌တွေရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ကနဦးအမျိုးအစားလို့ ဆိုရမှာပါ။ လမ်းကြမ်းတွေ၊ ဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာ မောင်းနှင်ဖို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Truck ကားတွေနဲ့ SUV ကားတွေမှာ အများဆုံးတွေ့မြင်ရလေ့ရှိပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် part-time 4WD စနစ်မှာ နောက်ဘီး ၂ လုံးက ပုံမှန်လည်ပတ်ပြီး လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ယာဉ်မောင်းသူက ခလုပ်နှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေ၊ လီဗာပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်စေ၊ လေးဘီးယက်စနစ်ကို ပြောင်းလဲလိုက်နိုင်တာပါ။
4WD ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်
အထက်ကဆိုခဲ့သလိုပဲ ဆိုးရွာတဲ့လမ်းမျက်နှာပြင်မျိုး၊ မတ်စောက်တဲ့တောင်တက်တောင်ဆင်းတွေနဲ့ ရွှံ့စေးတွေနဲ့ချောနေတဲ့လမ်းမျိုးတွေမှာ 4WD စနစ်ဟာ မောင်းဖို့အကောင်းဆုံးလို့ ယေဘုယျသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ 4WD ဒီဇိုင်းတွေကို ပြန်လည်မွမ်းမံအဆင့်မြှင့်တင်လာကြပြီး ဇိမ်ခံကားနဲ့ SUV တွေမှာ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်လာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မောင်းရတဲ့ခံစားမှုမှာတော့ 4WD စနစ်ဟာ အင်ဂျင်ရုန်းအားပိုပြင်းပြီး 2WD စနစ်လောက် ငြိမ့်ညောင်းမှုမရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုများလွန်းပြီး ပြင်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားတာကလည်း အားနည်းချက်တစ်ခုပါ။
AWD နဲ့ 4WD ဘာကိုရွေးမလဲ
လေးဘီးယက်စနစ် ၂ မျိုးဖြစ်တဲ့ AWD နဲ့ 4WD အနက် ဘာကိုရွေးမလဲဆိုတာကတော့ မိမိနေထိုင်ရာဒေသ၊ မောင်းနှင်မယ့်လမ်းကြော၊ အသုံးပြုမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ချိန်ထိုးစဉ်းစားပြီး စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AWD စနစ်ကို သာမန်အိမ်သုံးကားတွေ၊ Truck တွေနဲ့ SUV အမျိုးအစားတွေစတဲ့ အရွယ်စုံကားတွေမှာရရှိနိုင်ပြီး မြို့တွင်းမြို့ပြင်မရွေး သုံးလို့သင့်တော်ပါတယ်။ 4WD ကတော့ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ နေထိုင်သူတွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပြီး လမ်းကြမ်းမောင်းမယ့် Truck ကားတွေ၊ SUV အမျိုးအစားတွေ၊ ဝန်တင်ကားတွေနဲ့ ဆွဲကားတွေအဖြစ် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Ref: AWD vs. 4WD: What's the Difference? by Peter Gareffa